हिमालयन रि इन्स्योरेन्स असार १७ बाट सञ्चालन आउने, ३ अर्बको आईपीओ ल्याउने - Laganikhabar
सोमबार, ०७ असार २०७८, ०७ : ३८ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौं - गत जेठको तेस्रो साता कम्पनी स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी असार १७ गते अर्थात् जुलाई १ तारीखबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । हिमालयन रिले गत जेठ तेस्रो साता बीमा समितिबाट कम्पनी स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीलाई असार महीनाभित्र नै सञ्चालन गर्ने गरी संस्थापकहरू तयारीमा लागेका हुन् ।
सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि हिमालयन रि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । साथै, संस्थागत लगानीतर्फको सेयर लगानी (रू. ७ अर्ब) पनि जुटिसकेको छ ।
बालुवाटारमा कम्पनीको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा शेखर गोल्छालाई नियुक्त गरिसकिएको छ । कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिका लागि बीमा समितिमा आवेदन दिइसकेको संस्थापक लगानीकर्तामध्येका एक सदस्य व्यवसायी पशुपति मुरारकाले बताए ।
निजीक्षेत्रको स्वामित्वको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १० अर्ब रहेको छ । त्यसमा संस्थागततर्फको लगानी रू. ७ अर्ब रहेको छ । बाँकी रहेको ३ अर्ब भने सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेर जुटाइने मुरारकाले बताए । अभियान दैनिकमा खबर छ ।
अजोड इन्स्योरेन्सले कसलाई नियुक्त गर्यो सेयर रजिष्ट्रार
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको लाभांश आज पारित हुँदै
नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भएको छैन : बीमा समिति